🥇 Ugcino-zincwadi kumthumeli
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 493
Ividiyo ye-accounting yomthumeli
Myalelo we-akhawunti yomthumeli
Ulawulo oluyimpumelelo lwezothutho lwempahla ngokuthe ngqo luxhomekeke ekusebenzeni kokuhambisa umsebenzi, ngexesha elifanelekileyo kunye nokuhlaziya ngokukhawuleza kolwazi olusetyenzisiweyo kunye nombutho ocacileyo wolungelelwaniso lwezothutho. Ukusombulula le ngxaki, kubalulekile ukusebenzisa iitekhnoloji zesoftware ehambelanayo. Inkqubo accounting yabathumeli beempahla, ephuhliswe ziingcali zeUSU-Soft, ibonelela ngeseti epheleleyo yezixhobo zokubeka iliso kwimo kunye nezobuchwephesha bezothutho, kunye nokuvumela ukuba usebenze zonke iinkqubo zokusebenza kunye nemveliso yenkampani yamalungiselelo. Inkqubo ye-USU-Soft ye-accounting yabathumeli inakho konke ukwenza umsebenzi wakho ukuba usebenze kwaye ulunge kangangoko kuba inemisebenzi emininzi eluncedo: ukuzenzekelayo kokuhamba komsebenzi, iindawo zokuhlala kunye nokusebenza, iinkonzo zasimahla zonxibelelwano lwangaphakathi nolwangaphandle, ujongano olunomdla kunye nesakhiwo esilula. Kwangelo xesha, inkqubo yobalo lwekhompyuter eyenziweyo sithi yahluke ngokungafaniyo. Kuyo ungalawula ubonelelo kunye nokugcina impahla, ucwangcise ukuthuthwa kunye nokwenza ishedyuli yemveliso yezithuthi, ukulawula ukusetyenziswa kwezixhobo zombane kunye namandla, ukusebenza ekukhuthazeni iinkonzo kwintengiso kunye nokutsala abathengi, ukwenza uphicotho-zincwadi zabasebenzi nokunye okuninzi. Isoftware yethu yokuthumela impahla yokuthuthwa kwemithwalo ineesetingi eziguqukayo, ukuze uqwalaselo lwesoftware yobalo-mali luthathele ingqalelo izinto ezizodwa kunye neemfuno zenkampani nganye.
Ukusebenza kwinkqubo ye-USU-Soft ye-dispatchers 'accounting, abathumeli bajonge inkqubela phambili yenqanaba ngalinye lokuthuthwa kwemithwalo, phawula amanqanaba adlulisiweyo, thelekisa eyona mileage icwangcisiweyo yosuku, ukubala i-mileage eseleyo kunye nokuqikelela ixesha eliqikelelweyo lokufika indawo ekuyiwa kuyo. Ukuqinisekisa ukuba yonke into ethunyelwa iziswa ngexesha, abasebenzi bakho bayakwazi ukutshintsha iindlela zothutho ngexesha lokwenyani, ukudibanisa ukuthunyelwa, kunye nokusebenza kwendlela yokusebenza. Kwaye le yinxalenye yamathuba anikezelwa yinkqubo yethu yokuthumela yokulawulwa kwengxelo. Umthumeli wezothutho uya kufaka idatha kwiindleko ezenziweyo ngexesha lokuziswa kwazo ukuze kulawulwe ukufunyanwa kwamaxwebhu kubaqhubi abaqinisekisa iindleko. Ndiyabulela kule nto, unokujonga ukuthethelelwa kweendleko nangaliphi na ixesha. Ukongeza, abathumeli banokufikelela kulawulo lobuchwephesha bezithuthi ezisetyenzisiweyo kunye nokugcina idathabheyisi eneenkcukacha zazo zonke izithuthi.
Isakhiwo se-laconic senkqubo ye-dispatchers yolawulo lobalo-mali inamacandelo amathathu aphambili, ngalinye elenza imisebenzi ethile. Icandelo lezalathiso yindawo yogcino lwedatha eyenziwe ngabantu. Iikhathalogu, ezinokuhlaziywa ukuba kukho imfuneko, ziqulathe iintlobo ngeentlobo zolwazi: iintlobo zeenkonzo zamalungiselelo, iindlela ezenziweyo kunye neenqwelo moya, ukutyunjwa kwempahla kunye nezinto zokusebenza, amasebe kunye nendawo yokugcina izinto, izinto zokwenza ingxelo ngenkcitho kunye nengeniso, iidesika zemali kunye nebhanki iiakhawunti. Icandelo leeModyuli liyimfuneko ekuququzeleleni iindawo ezahlukeneyo zomsebenzi. Kuyo, abasebenzi babhalise iiodolo zothutho, ukubala iindleko eziyimfuneko ekuphunyezweni kwayo kunye nokujonga ixabiso leenkonzo zothutho, ukuphuhlisa eyona ndlela ifanelekileyo kunye nokuchongwa kwendiza efanelekileyo. Ulawulo lwezothutho lwezothutho, ukulandelelwa kokuhamba kwemali, ukugcina iirekhodi zokugcina, kunye nokuphuhlisa iindlela zokuthengisa nazo ziyenziwa apha. Abasebenzi bakho basebenzisa izixhobo ezinje ngefaneli yentengiso kunye nohlalutyo lwendlela yokusebenza yokunyusa abathumeli bethu; Inkqubo yobalo-mali esemgangathweni ibonelela ngokuthumela imithwalo. Iinkonzo zomnxeba neze-imeyile zikwafumaneka simahla. Icandelo leNgxelo likuvumela ukuba ukhuphele iingxelo zezemali kunye nezolawulo ukuze wenze uhlalutyo olubanzi lwezikhombisi zenzuzo, inzuzo, ingeniso kunye neendleko.
Utshintsho kunye nolwakhiwo lotshintsho lweziphumo zezemali ziya kuboniswa kwiitafile ezibonakalayo, iigrafu kunye nemizobo, ngelixa ukuvelisa iingxelo kwinkqubo yabathumeli yolawulo lobalo-mali kuya kuthatha ixesha elincinci. Ke, isoftware inazo zonke iimpawu kunye namathuba abanzi okwenza iinkqubo ekufuneka zenziwe. Unokuzikhuphelela ingxelo yesimahla yesoftware kweli phepha emva kwenkcazo yemveliso. Ulawulo lwezothutho luya kusebenza ngakumbi ngenxa yokwenziwa kweshedyuli yokuhanjiswa okukufutshane kwimeko yabathengi kunye nokulungiswa kwangaphambili kwezothutho ukuze kuzalisekiswe iiodolo. Iingcali zenkampani yakho ziya kufaka ulwazi malunga neepleyiti zamaphepha mvume, iimveliso kunye nezinye iimpawu zezithuthi, abanini bazo kunye namaxwebhu ahambelana noko. Inkqubo yolawulo lokuthunyelwa kwezithuthi yazisa abasebenzi abanoxanduva ngemfuno yokwenza ulondolozo lwesithuthi esithile. Emva kokuhanjiswa kwempahla kunye nemithwalo, zonke iintlawulo eziphambili ezifunyenwe kubathengi zirekhodwa kwiziko ledatha ukuze kulawulwe kwangexesha imibuzo ephakamayo. Ukongeza, enkosi kulwazi olucacileyo lwenkqubo yobalo-mali, uya kuba nakho ukufikelela ekubekweni kweliso lokuhamba kwemali kunye nokusebenza kwemali, ngelixa idatha yezemali yawo onke amasebe iza kudityaniswa kumthombo omnye.
Ummiselo wevoliyumu yokusetyenziswa kwezibaso kunye nezinto zokuthambisa zenziwa ngokubhalisa kunye nokukhutshwa kwamakhadi amafutha kubaqhubi, emiselwe umda wokusetyenziswa kwepetroli. Kwakhona, abathumeli benza iifom zendlela, ezichaza indlela kunye noluhlu lweendleko. Inkqubo yokuvunywa komyalelo we-elektroniki yazisa abasebenzisi ngokufika kwemisebenzi emitsha kwaye ikuvumela ukuba wenze amagqabantshintshi kwaye ujonge ukuba lingakanani ixesha elichithwe ekugqityweni kwabo. Kwimodyuli yeCRM (yoLawulo lwaBathengi baMthengi), abaphathi babaxhasi bayakwazi ukusebenzisa izixhobo zasimahla njengefaneli yentengiso, ukuguqulwa kunye nokubhaliswa kwezizathu zokufumana ukwaliwa kwiiodolo. Kwidathabheyisi yoku-odola ngokubonakalayo, ukuhanjiswa ngakunye kunesimo saso esithile kunye nombala, owenza lula ukuhambisa umsebenzi, ukulandela umkhondo wenqanaba lokuhambisa nokwazisa abathengi. Ukuvavanywa kokusebenza kwemikhankaso yentengiso esetyenzisiweyo ikuvumela ukuba uchonge iindlela zokwazisa ezifanelekileyo kakhulu ekutsaleni abathengi abatsha. Enkosi kuhlalutyo lwamandla okuthenga, unokwenza amaxabiso akhuphisanayo, wenze uluhlu lwamaxabiso kunye neekhathalogu zeenkonzo kwaye uzithumele nge-imeyile.
Umsebenzi wohlalutyo lwenkqubo yobalo kunceda ukubeka esweni imeko yangoku yemali yenkampani kunye nokufumanisa ezona ndawo zinenzuzo kuphuhliso lweshishini. Ukuvavanywa kokusebenza kweendleko kutyhila inkcitho engekho ngqiqweni, kwandisa iindleko kunye nokunyusa inzuzo yemisebenzi. Amaxwebhu ayimfuneko okuhambisa aya kwenziwa kwangoko aze aprintwe kwifom esemgangathweni.